လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ နည်းဥဒေပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန် အချိန - Yangon Media Group
လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဥပဒေသည် နိုင်ငံသားအားလုံး၊ ပြည်သူအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင် သော ဥပဒေမဟုတ်ဘဲ သက်ဆိုင်သောသူများနှင့် အဓိကပါဝင်ပတ်သက်သူများဖြစ်ကြသည့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိနေသော အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားများက အလေးထားလုပ်ဆောင်ရမည့် ဥပဒေမျိုးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါဥပဒေတွင် ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍ၊ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၊ ရေလုပ်ငန်းကဏ္ဍများပါ ပါဝင်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ထို့ကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီအတွက် လိုအပ် သော နည်းဥပဒေများရေးဆွဲရန်မူ အချိန်ကာ လ ကြာမြင့်နိုင်ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
”အဓိက,က Fundamental Rules တွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ တာဝန်ယူဆွဲပါတယ်။ အခြေခံမရှိမဖြစ် အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာ တွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ဌာနက မဖြစ်မနေဆွဲပါတယ်။ ဥပဒေမူကြမ်းကို လွှတ်တော်အဆင့်ဆင့်ကို တင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နဂို တုန်းကရေးထားတဲ့ Draft အတိုင်း ဒီဥပဒေက ဖြစ်မလာဘူး။ ဒါအမှန်တရားပဲ။ လိုနေ တယ်ထင်တဲ့ဥစ္စာကိုထည့်တယ်။ ပိုတယ်ထင်တဲ့ဥစ္စာကို ဖြုတ်တယ်။ တချို့လည်းလိုတယ် ထင်နေရင် ထပ်ဖြည့်တာလေးတွေရှိတယ်။ ဒီအပေါ်မှာ စောဒကတက်စရာတော့ မရှိဘူး” ဟု ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးညွန့်ဝင်းကပြောသည်။
အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားများမှ ထပ်မံတင်ပြလာသော လိုအပ်နေသည့် အချက်အလက်များကို ထပ်မံဖြည့်သွင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းအတွင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ် အတွင်း နွံကန်ကျိုးပေါက်ပြိုကျမှုဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ”ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတယ်။ သေ ကျေပျက်စီးမှုတွေရှိတယ်။ ဒီအချက်အလက်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဦးစီးဌာနကို တရားဝင်အချက်လက်တွေ မရောက်လာဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အကျုံးဝင်စစ်ဆေးပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ဥပဒေနဲ့ လွှမ်းမိုးလို့ရတယ်ဆိုရင်၊ အချက်အလက်လဲ တောင်းလို့ရတယ်ဆိုရင်၊ ကျွန်တော်တို့က ဒီဟာကိုလဲ သတင်းမပို့ဘူးဆိုရင် ကျွန် တော်တို့က အရေးယူလို့ရတယ်။ အခုဟာက ကျွန်တော်တို့ စည်းကြပ်တဲ့ အဝန်းအဝိုင်း မဟုတ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ သုံးသပ် ပြောဆိုစရာမရှိပါဘူး”ဟု ၎င်း ကပြောကြားသည်။
ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလုပ်ငန်း ခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုနှင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု အခြေအနေများမှာ စစ်တမ်းများအရ သစ်ပါးလွှာလုပ်ငန်းနဲ့ သံရည်ကြိုလုပ်ငန်းနှစ်ခုတွင် အများဆုံးဖြစ်သည်။ ”ကျွန်တော်တို့ စစ်ဆေးပိုင်ခွင့်မရှိသေးတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ဟိုနှစ်ခုထက် ကျော်ပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ ဆောက်လုပ် ရေးလုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အလုပ်သမားများ အနေဖြင့် ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ အသုံးမပြုခြင်းနှင့် အသုံးပြုရန် သိနားလည်မှု အားနည်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းရှင်များအနေ ဖြင့်လည်း ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အားနည်းနေခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေ စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးညွန့်ဝင်းနှင့် အရာထမ်းများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ (ILO)မှ ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအရာရှိ Mr. Rory Mungoven နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ စက်ရုံ အလုပ်ရုံတို့မှ အလုပ်ရှင်အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် မီဒီယာများ တက် ရောက်ခဲ့ကြသည်။ အခမ်းအနားတွင် ဒေါက်တာသန်းထွဋ် ဦးဆောင်သော သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ ပါဝင်သည့် Future of Work စကားဝိုင်း ဆွေးနွေးပွဲကို တစ်ပါတည်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ ကမ္ဘာ့လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးနေ့ကို စတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး ILO ကဲ့သို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ် သမားရေးရာအဖွဲ့များ၏ အကူအညီဖြင့် ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်ကာ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား အရေးနှင့် လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်နေ ကြောင်း သိရသည်။
ကိုဝလုံးနှင့် ကိုကျော်စိုးဦး အပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၄၅ ဦးကို အမြန်ဆုံး လွှတ်ပေးရန် အ?
မြန်မာနှင့် အိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရေး နှစ်(၇ဝ)မြောက်နေ့ အထိမ်းအမှတ် ‘မြန်မာနေ့’အခမ်းအနာ
အီတလီနိုင်ငံ ဗင်းနစ်မြို့တွင် မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်မှုကြောင့် ရေကြီးမှုဖြစ်ပွား
ငွေစက္ကူအတုမှန်း မသိဘဲ သုံးမိသူများ ထိခိုက်နစ်နာမှု မရှိရေး ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေကို ရှင်းလင်းအောင်ြ??